अडी TT कार अडियो स्टेरियो .0.० China Manufacturer
विवरण:अडीटी टीटी कार स्टेरियो,अडी TT कार अडियो,अडीटी टीटी .0.०
Home > उत्पादनहरू > अडी एन्ड्रोइड कार डीवीडी प्लेयर > अडी TT कार अडियो स्टेरियो .0.०
१. कृपया हामीलाई तपाईंको पूरा डेलिभरी ठेगाना, वैध टेलिफोन नम्बर र पोष्ट कोड AliExpress मा प्रदान गर्नुहोस्। कृपया हामीलाई तपाईंको कर आईडी नम्बर बताउनुहोस् यदि ब्राजिलमा शिपिंग भयो। हामी केवल AliExpress पुष्टि गरिएको ठेगानामा पठाउछौं।
१) हामी सामान्य रूपमा DHL, FedEx, UPS वा EMS --- मार्फत पठाउछौं --- हामी तपाईंको बीचमा सबैभन्दा आर्थिक तरीका छनौट गर्नेछौं। २) यदि खरीददारलाई केही कुरियर वा अन्य एक्सप्रेस तरीकाले डेलिभर गर्न आवश्यक छ भने, कृपया हामीलाई भुक्तान अघि मूल्य समायोजित गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्।
)) यदि तपाईंको शिपिंग ठेगाना टाढाको इलाकामा छ भने, खरीदारले टाढाको क्षेत्र शुल्क तिर्न सोधे । हामी तपाईंलाई बाहिर पठाउनु भन्दा पहिले सूचित गर्नेछौं।
)) हाम्रो अनुभवको रूपमा, 90 ०% भन्दा बढि कुनै पनि करहरू तिरेको बिना खरीददारमा पुग्न सक्छ। हामी नमूना वा उपहारको रूपमा वस्तु बताउने जस्ता करहरू भुक्तान गर्ने जोखिमलाई कम गर्न हाम्रा खरीददारहरूलाई मद्दत गर्न हामी सक्दो कोशिश गर्नेछौं। तर हामी कुनै पनि खरीददारको स्थानीय आयात कर वा भन्सार ढिलाइको लागि जिम्मेवार छैनौं। आयात शुल्क, करहरू र शुल्कहरू आईटम मूल्य वा शिपिंग शुल्कहरूमा समावेश छैनन्। यी शुल्कहरू खरीददारको जिम्मेवारी हो।
तपाईंको समझ र ध्यान अत्यधिक सराहना गरियो।
२. हामी २ बर्ष वायु वारंटी प्रदान गर्दछौं । सबै वस्तुहरू राम्ररी प्याक छन्, नयाँ, कहिल्यै प्रयोग गरिएको छैन, मर्मत गरिएको छैन। यदि तपाईं एक गल्ती वस्तु प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, कृपया हामीसँग days दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहोस् रसीदमा हस्ताक्षर पछि। हामी यसलाई फिर्ता वा बदल्नेछौं।
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई स्थापना र प्रयोगको बखत कुनै प्राविधिक समस्या छ। हामी प्रयोगकर्ताहरुलाई पेशेवर आस्थापक मार्फत यो आईटम स्थापना गर्न सुझाव दिन्छौं।
प्रत्येक वस्तु ढुवानी अघि राम्रो परीक्षण गरीएको छ। हामी १ 14 दिन प्रतिस्थापन ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्दछौं, र एक महिना शिपिंग लागत समर्थन गर्दछौं यदि एक महिनामा गल्ती पुष्टि गर्दछ। हामी चीनबाट तपाईंको गन्तव्यमा शिपिंग लागतको लागि जिम्मेवार हुनेछौं जबकि खरीददारले फिर्ताको लागत तिर्नेछ। सबै रिटर्न हाम्रो सेवा पछि कर्मचारी द्वारा पुष्टि गर्नुपर्नेछ, हामी पूर्व सूचना बिना कुनै पनि फिर्ती प्याकेजको लागि उत्तरदायी छैनौं।
कृपया हामीलाई यसको मूल प्याकिंगमा कुनै स्क्र्याचहरू वा क्षति बिना फिर्ता पठाउनुहोस्।
वारेन्टी निम्नको रूपमा अलग गरिनेछ:
नोक्सानीको कारणले: अनावश्यक पोशाक र च्याछ, फोहोर, दुरुपयोग, अनुचित स्थापना वा अपरेसन, उपेक्षा, दुर्घटना।
अडीटी टीटी कार अडियो स्टेरियो .0.० को तस्वीर:
अडियो टीटी कार अडियो स्टेरियो 6.० को सहायक उपकरण:
TT 2006-2013 को लागि Android for.१ कार अटोमेडिया अब सम्पर्क गर्नुहोस्
अडियो ए 2003 २०० 2003-२०१ Android को लागि एन्ड्रोइड .0.० कार स्टेरियो अब सम्पर्क गर्नुहोस्
अडी A4 २००२-२००8 को लागि अटो डीभीडी प्लेयर अब सम्पर्क गर्नुहोस्
अडियो टीटी २००-201-२०१ for को लागि कार मल्टिमेडिया नेभिगेसन प्रणाली अब सम्पर्क गर्नुहोस्
अडीटी टीटी कार स्टेरियो अडी TT कार अडियो अडीटी टीटी .0.० डीवीडी जीपीएस कार स्टेरियो ब्लुटुथ कार स्टेरियो सीट लियोन कार स्टेरियो निसान जुके कार स्टेरियो पोलो २ दिन कार स्टेरियो